Nkọwa ihe omimi Otu esi emezi mgbanwe nke SEO na Niche Nkọwa
E nwere nnukwu ihe mpi n 'ubi nke SEO, nyochamaka "SEO" ma ọ bụ "ahịa ahịa" ma ị ga-ahụ ọtụtụ nde nsonaazụ na nke a gụnyere azụmahịa na ndị mmadụ na-alụ ọgụ maka agbara na visibiliti. Uru nke ijere niche dị iche iche ma ọ bụ pụrụ iche bụ na ị ga-enwe obere mpi mana ị ga-enweobere ndị na-ege ntị na ihe onwunwe iji nyere gị aka inwe ọganihu. Kedu ihe ọ ga - eme ka ị nwee ọganihu na niche pụrụ iche ma meliteOhere oganihu SEO?
Jack Miller, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ọkachamara ,na-enye ndụmọdụ ndị na-enye aka ga-eme ka ị merie mgbasa ozi SEO na-emeri.
Tupu ihe ọ bụla ọzọ, wepụta oge iji mụta ma ghọta ndị na-ege gị ntị.Ị nwere ike ịmalite na nyocha ahịa ahịa ndị dị mkpa mana ị ga-achọkwu ihe iji chọpụta mkpa ndị ahịa gị, ihe mmasị ọdịnaya na àgwà gị.Nke a ga - enyere gị aka ịkwụsị ihe gbasara ndị mmadụ na - eme nyocha, na - enye gị ụzọ dị mkpirikpi maka ihe ka mma nke ga - eme ka ị nwekwuodị mkpa maka mkpa ndị na-ege gị ntị.
Jiri Long-tail Phrases
Oge kachasị mma ịmalite ịchọta nchọpụta isiokwu ogologo oge bụ mgbe ị ghọtara yaotú ndị na-ege gị ntị na-enyocha ozi ma ọ bụ ngwaahịa na niche gị. Ntugharị Google nke Hummingbird na Panda nwere mmetụta dị njọ naederede omenala mana mkpuru okwu nke ogologo oge ka na-arụ ọrụ maka niches pụrụ iche. Kama itinye uche na isiokwu ndị na - enye gị okporo ụzọ,jiri ogologo oge na-ekwu okwu na azịza ya, ndị a kachasị mma maka niche pụrụ iche.
Echiche Nzuzo Naanị
Kama ime ka echiche nke ndị ọzọ dị ọhụrụ, bia n'eziokwuechiche mbụ. I nwere ike ime nke a site na nyocha, ma jụọ ajụjụ ndị a na-ajụbeghị ajụjụ..Nke a ga - eme ka gị naakara gị dị ukwuu.
Chọta Oghere maka Ndị Bipụtara N'Ịntanet
Iji meziwanye ọnọdụ nchịkwa gị na nchịkwa na ngalaba,ịkwesịrị njikọ dị iche iche dị ka posts niche-elekwasị anya. Nke a pụtara na ọ ga-adị gị mkpa ịrụ ọrụ na ndị na-ebipụta akwụkwọ. I nwere ike ideọdịnaya nke dị mkpa maka ike gị - ma ọdịnaya kwesịrị ịba uru nye ndị na-ege gị ntị. Nke a nwere ikeachọrọ ka i mee nkwekọrịta ma njikọ ị ga - enweta ga - eme ka nchọnchọ gị dị.
Mụta n'aka ndị asọmpi gị
Kama ịgbalị ịlụso ndị nọ n'otu ubi ahụ ọgụ dị ka gị,jikọọ na ha ma mụta ihe ha na-eme n'ụzọ dịgasị iche iche ma echefukwala ịkọrọ oke nghọta gị. Enweghi ihe ize ndụ ebe a n'ihiniche gị dị ntakịrị ma a gaghị amanye gị.
Ebe ọ bụ na ịnweghị data ị ga-arụ ọrụ na mkpọsa SEO gị, maliteobere. Jiri mkpuru okwu ole na ole n'otu oge ma dee ihe ohuru ohuru tupu okwute gi. Nke a ga - enyere gị aka ịchọta ozi ga - abụdị oké mkpa mgbe ị na-aga nnukwu.
Jiri mgbasa ozi mgbasa ozi n'ihi na ọ bụ ụzọ kachasị mma maka ndị mmadụ ga-achọtaị. Mgbasa mgbasa ozi bụkwa ebe kachasị mma iji meziwanye anya gị tupu i tinye uche n'ichepụta ọchụchọ. Ọ ga-enyere gị aka ijikọna-emetụta ihe ị na - eme ma melite ihe ndị ị na - esote
Mepụta Community saịtị
Nke a nwere ike ime site na nzuko obodo ebe ndị ọrụ gị gajikọọ onwe gị. Nke a na - akwalite iguzosi ike n'ihe ka ukwuu ma nyere gị aka ịmalite ọdịnaya ọhụrụ.
Nye Onyinye Uche
Iji wuo mmekọrịta dị mma karịa ndị nkwusa gị,ịkwesiri ịnye ụfọdụ ọdịnaya. Ị nwere ike ime nke a site na ịkewaa blọọgụ gị n'ime nkewa ma echefuola na ntanetị niche gị.Nke a ga - enye gị nnukwu ndị na - ege ntị ga - agụ ma kesaa ọdịnaya gị Source .